बच्चा भएपछि पनि यौन जीवन कसरि उत्साहमय बनाउने ? : टिप्स – Idea Khabar
बच्चा भएपछि पनि यौन जीवन कसरि उत्साहमय बनाउने ? : टिप्स
आइडिया खबर२०७६ माघ १८, शनिबार १५:०९
एक सन्तान भएपछि कसैले पनि यौनको चाहना सकियो भन्ने ठान्न हुँदैन । कतै बिहे गरेपछि यौन बिनाको दाम्पत्य जीवन बिताउनतर्फ त लाग्नुभएको छैन ? त्यसो होइन्, बरु यसलाई अझ उत्साहमय बनाउने प्रयत्न गर्नुतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि केही उपायहरु यस्ता छन्ः
१. सेक्सको महत्व
जो कोहीले पनि सेक्सलाई विशुद्ध सन्तानोत्पादनका लागि आवश्यक क्रिया ठान्न हुँदैन् । दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय, रंगिन र उत्साहप्रद बनाइराख्न श्रीमान–श्रीमतीबीचको आत्मियतालाई टिकाइराख्न सेक्स आवश्यक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुस् ।
श्रीमानको महत्व बच्चा जन्माउने बेलामा महिलाले अझ राम्रोसँग बुझ्छन् । श्रीमानले दाम्पत्य जीवनमा श्रीमतीको त्याग, बलिदान आदिलाई नजिकबाट महसुस गर्छन् । यसले दुईबीचको प्रेमलाई अझ सघन बनाउँछ ।
३. रोमान्टिक कोठा
सुत्केरी श्रीमतीको कोठामा केही सातापछि मधुर रोमान्टिक गीतको मन्द धुन लगाउने, फूल राख्नेलगायत रोमान्टिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुस् । यसले महिलाको शरीरमा सेक्स हार्मोनको उत्सर्जनलाई तीव्र बनाउँछ र तपाईंको रोमान्टिक दिनचर्या चाँडो नजिकिन्छ ।
बच्चा जन्माउँदा कतिपय महिलालाई एप्सिटमी नामक छोटो सर्जरी गरिएको हुन्छ । बच्चा जन्माएपछि सेक्समा सरिक हुँदा टाँका लगाएको ठाउँमा दुख्न सक्छ । सर्जरी गरेको छदेखि आठ हप्ताभित्रमा सर्जरीको असर प्रायः हटेर जान्छ र यौनांग पूर्ववत अवस्थामा आउने क्रम तीव्र बन्छ । सर्जरी गरेको ठाउँमा सेक्स गर्दा दख्खल त पुग्दैन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ । यदि दख्खल पुग्ने सम्भावना छ भने फोरप्ले आदिबाट चित्त बुझाउनुपर्छ ।
५. मन प्रसन्न
मन प्रसन्न हुने काम गर्दा शरीरमा एड्रनेलिन नामक रसायन उत्सर्जन हुन्छ, जसले दम्पतीलाई सेक्सको मुडमा पु¥याउँछ । यसका लागि दुवैजनालाई मन पर्ने फिल्म हेर्ने, गीत सुन्ने आदि गर्नुपर्छ । तनाव भएको छ भने रुचीको काम गरेर चित्तलाई प्रसन्न राख्नुपर्छ ।
सन्तान प्राप्तिपछि श्रीमतीलाई आफू कम आकर्षक भएको चिन्ता हुनसक्छ । श्रीमतीलाई यस्तो महसुस गर्न नदिन आफू उनीप्रति अझै आकर्षित भएको र सेक्स गर्ने दिनलाई व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेको संकेत दिनुस् । यसले उनलाई राहत र मानसिक शान्ति दिन्छ ।
पौष १० गते सूर्य ग्रहण : ग्रहण के हो ? ग्रहणमा के गर्न हुन्न र के गर्न हुन्छ ? वैज्ञानिक विश्लेषण
२०७६ पुष ४, शुक्रबार १२:२३
आँखा हेरेर गुण र क्षमता थाहा पाउन सकिन्छ
२०७६ फाल्गुन ३, शनिबार ०८:४८
सफल कसरि बन्ने ? हेर्नुहोस् यि पाँच आइडिया
२०७७ चैत्र १८, बुधबार ०५:५६
रुघाखोकी र ज्वरो आएको छ भने तत्काल यि उपाए अपनाउनोस्
२०७६ माघ १२, आईतवार १९:२८
अर्जेन्टिनामा बन्यो अचम्मको कण्डम, दुईजनाको सहमतीपछि मात्र खोल्न मिल्ने
२०७६ पुष १३, आईतवार १७:३१
जाडोमा ह्रदय घातको उच्च जोखिम : एक महिनाअघिदेखि देखिन थाल्छ यस्ता लक्षण
२०७६ पुष १०, बिहीबार १५:४०